Isa Android Tv pane yako Raspberry Pi | Linux Vakapindwa muropa
Isa Android Tv pane yako Raspberry Pi
Isu tinoenderera mberi nekuiswa kwemamwe masisitimu pachigadzirwa chedu chidiki, nguva ino inguva yeApple TV. Kusiyana nemasystem apfuura andakagovana pano, Iko hakuna yepamutemo uye yakagadzika vhezheni yeAroid yeedu Raspberry Pi, yakakwana yekugadzira yedu yega Android TV Box.
Parizvino iyo yakawedzera kana kushoma izere ndeye RaspAnd asi iyi yakabhadharwa vhezheni yeApple iyo ine mutengo we9 USD uye ichine zvimwe zvevana vadiki.
Ndosaka vasiri vazhinji venyu muchida kuburitsa mari kuitira iyo system isina kukwana, ndoda kugadzikana.
Ipapo iwe unogona kunge uchishamisika kuti unganakirwe sei neApple TV pane ako mafaera. Naizvo Kune akati wandei Android mifananidzo yakatenderedza mambure, Pakati pazvo patinogona kuwana Andoid Tv uye Android vhezheni sekunge yaive yako smartphone.
De pakati pezvakasiyana Android mifananidzo yandakawana mambure, Ndawana kubva pa5.0, 6.0 uye 7.1, umo mairi maviri ekutanga mavhezheni aive nemabhureki akati wandei uye kushandiswa kweiyo sisitimu pachinzvimbo chekunakidza kwechinguva chevaraidzo kwakaguma kwave kutemwa nemusoro.
1 Maitiro ekuisa Android TV paRaspberry pi?
2 Kuisa Android TV paRaspberri Pi
3 Maitiro ekuisa kunyorera pane Android TV?
Maitiro ekuisa Android TV paRaspberry pi?
Mushure mekuyedza kwakawanda ndakawana imwe isina kugadzikana zvachose, asi yakanga isina zvikanganiso zvakajairika zvemimwe mifananidzo.
Mushandisi geektillithertz anogovera mufananidzo weiyo Android TV, iyo yatinogona kuwana nekuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti chinongedzo ichi.
Uye isu tinogona kurodha pasi mufananidzo weiyo system iri mune iyi link.
Android TV mufananidzo watotorwa kare isu tinoenderera nekumisikidza pane yedu SD kadhi
Kuisa Android TV paRaspberri Pi
Tinofanira kudaro isa kadhi redu reS SD mukombuta yedu kungave zvakananga kana uine kadhi kuverenga kana nerubatsiro rweadapteri.
Si urikuita maitiro aya kubva ku linux chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndechekuti fomati yedu SD kadhi nezvazvo isu tichaenda kuzvitsigira neGparted.
Chete Tinofanira kuipa muFat32 fomati uye ndizvozvo. Pano zvakakosha kuti isu tione iyo inokwidziridza kadhi kadhi redu rakafanana neGparted application inotiudza.
Waita izvi izvozvi tichaita unotevera kuraira kuti utore iyo Android TV mufananidzo:
dd bs=4M if=/ruta/a/androidtv.img of=/dev/sdX conv=fsync
Iko kana isu tikaratidza nzira kwatinochengetedza iyo RaspArch mufananidzo uye yegomo nzvimbo ye SD yedu.
Solo Tichafanirwa kumirira kuti system inyorwe uye kana izvi zvapera tinokwanisa kuisa iyo SD mune yedu Raspberry Pi.
Iye zvino kana uri kuita izvi kubva kuWindows, unofanira kutora Win32 Dhisiki Imager kunyora mufananidzo.
Kuomesa SD yako unogona kushandisa SD Fomati. Neiyo yakamisikidzwa SD, iwe unofanirwa Vhura Win32 uye woratidza nzira yeiyo Android TV uye nekukwiridzira kwe SD yako wobva wadzvanya paNyora.
Uye voila, unogona kushandisa Android TV pane yako Raspberry Pi.
Maitiro ekuisa kunyorera pane Android TV?
Kamwe Android yaiswa uye yedu Raspberry Pi yakabatana, ichatanga kurodha sisitimu, izvi zvinotora chinguva.
Kana tangotanga isu tichava pachiratidziri chikuru.
Pano tave kuzobatanidza kune network kana netambo tambo kana neWifi kubatana. Kana tangobatana tichaona ruzivo rwekubatana kwedu uko uko kunotipa iyo IP kero yeyedu mudziyo.
Nayo ticha dhawunorodha iyo Amazon FireTV Utility App iyo inongowanikwa chete kuti ive mhanya paWindows.
Vhura iyo application yatichaenda kumenyu> Faira> Sarudzo
Uye isu tichaisa IP kero yeRaspberry Pi yedu uye isu tinokwanisa kutanga kuisa izvo zvinoshandiswa kure.
Izvi zvinogona kutorwa pasi kubva pane rinotevera peji, chinongedzo ichi.
Ichi Android mufananidzo Iyo haina GAPPS saka haungawane iyo Play Store mairi. Parizvino ini ndangoyedza neAptoide kutsigira kuisirwa mafomu senge Kodi, Chrome, Spotify nezvimwe.
Kunyangwe ivo vachigona zvakare kuyedza Flashfire, kunyangwe ini ndisina kuyiyedza izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Isa Android Tv pane yako Raspberry Pi
Mhoro! Ndatenda zvikuru nekutumira. Ini ndakariisa paRaspberry uye ini ndaida kukubvunza ... pane here sarudzo yekuisa mutauro wechiSpanish? Ndatenda!!
yangu yakanaka ndeye rpi 3b + uye pandinopinza iyo sd mu raspibheri uye ndoibaya mukati, chete skrini ine mavara inobuda uye ipapo inogara…. zvinotora senge 1h uye hapana ...
Pindura kuna Romero
Izvi zvinoratidza kuti mufananidzo wacho hauna kunyorwa zvakanaka. Iwe unozofanirwa kutarisa iyo hashi yemufananidzo iwe wawakadhinda.
Mubvunzo kuti ndeapi software auri kushandisa kunyora mufananidzo pane yako SD?
Chinhu chimwe chete chakaitika kwandiri, ndinofunga zvinowirirana neshanduro 3B chete nekuti mushanduro iyoyo yaindishandira asi muna 3b + haina
Pindura kuna Abrahama
Mhoroi, ndine rasipiberi pi2 ine raspand 7.1.2 uye inondiudza kuti iyo frequency iri kunze kwehurefu, uye mushure mekara rekara imwe inoonekwa nhema uye chena kunge maronda. Zvinotaridza kuti zvinoita sekunge mufananidzo chaiwo haugone kuoneka. Ipapo ini ndinodzvanya uye mushure mechinguva menyu inowoneka asi inoenda nejeki. Zvingave zvipi?
Mhoro, uchiona zvaunotaura, dambudziko rako rinogona kutorwa kubva kuzvinhu zviviri.
1 yako SD kadhi kumhanya haina kukurumidza zvakakwana sekirasi 10 kana yepamusoro SD inokurudzirwa
2 amperage yechaja yako yaunoshandisa haina kukwana uye haisi kupa simba rakaringana kuRpi yako.
Iwo mapurogiramu andinoshandisa ndiwo iwo aunoburitsa mune iyo posvo, izvo zvakanaka. Ndatenda!
Iyi sisitimu inoenderana neRaspberry pi 4?
Ndatenda nerubatsiro rwenyu
Mhoro, kuti uone kana ndichigona kusvika kubasa.
Inogona kuiswa pane rasipiberi pi 2 b + ??? uye kune rimwe divi, zvino inoshandawo netambo tambo, kana ndinofanira kushandisa wifi adapta kuti iite kuti ishande?
Kune rimwe divi, ndeipi vhezheni ye android tv iri ??
Kwazisai uye ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu.
Pindura kuna 9acca9
WebCatalog: isa webhu kunyorera pane yako system
Iyo itsva vhezheni yeCentOS Atomic Host 7.5 yave kuwanikwa